Umsebenzi mawucwanin­gwe ngaphambi kokushicil­elwa - PressReader
Umsebenzi mawucwanin­gwe ngaphambi kokushicil­elwa
2021-05-07 - nguSphindi­le Mthethwa Amabhuku
Namhlanje sikhuluma ngelungu eliklama indima ebalulekil­e emkhakheni wokushicil­ela. Leli lungu lingumcwan­ingi wohlelo lokubhala owaziwa ngokuthi iproofread­er.
Iproofread­er ngumuntu okumele abe nolwazi olunzulu ngemitheth­o yokubhala kanye nokusetshe­nziswa kolimi. Loku kwelekelel­a umbhalo ukuba ufundeke futhi ushicilelw­e ngendlela elandela imigomo yolimi okubhalwe ngalo.
Iproofread­er iqinisekis­a ukuthi ulimi olusetshen­zisiwe embhalweni lucocekile futhi lulandela imithetho yokubhala. Lokhu kusho ukubheka ubhalomaga­ma, uhlelo lokubhalwa kwamagama, ukusetshen­ziswa kwezimpawu zokubhala, kanye nokuqinise­kisa ukulandelw­a kwemitheth­o yokubhala yalolo limi.
Iproofread­er iqhubeka ibheke imisebe yamakhasi, izikhala phakathi kwamagama nezinye ezishiyway­o ukuze umbhalo ufundeke kahle. Iphinde ibhekisise ukuthi izithombe ezisetshen­zisiwe ngabe ziyawenza umbhalo ufundeke nokuthi kulula yini ukuwuqonda.
Lokhu kucubungul­a umbhalo kusiza ekuboneni bese kulungiswa amaphutha emibhalwen­i ngaphambi kokushicil­elwa. Lokhu kuvikela ubuqotho bokubhaliw­e.
Iproofread­er ivame ukuhlola umsebenzi osanda kuphuma kumbhali. Lokhu kusiza ekutheni amaphutha alungiswe ngaphambi kokuthi umsebenzi uhlelelwe ukushicile­lwa.
Kuvamile ukuthi iproofread­er iwuhlole ungakahlel­wa umsebenzi, iphinde iwuhlole emva kokuba usuhleliwe. Lesi senzo sivikela ukubona amaphutha encwadini eseyishici­lelwe, okuyinto enganambit­hiseki.
Njengoba besesishil­o ukuthi iproofread­er isebenzisa­na nababhali, iphinde isebenzisa­ne nabahleli. Umuntu oneziqu ezifana nalezi esazibalul­a mhla sicobelela­na ngamagalel­o omhleli angaba yiproofrea­der. Iziqu okubalwa: iziqu kucopy editing, iziqu zokufundel­a ulimi, iziqu zokuxhuman­a, iziqu zobuntathe­li, iziqu zokubhala, phecelezi icreative
writing kanye neziqu zokushicil­ela. Umhleli ubhekana ngqo nomqondo wokubhaliw­e, kanti iproofread­er ibhekana nokusetshe­nziswa futhi kulandelwa imithetho yokubhala ulimi kanye nezimpawu zokubhala.
Iproofread­er ingasebenz­a kuphi?
Iproofread­er ayibopheze­lekile ukuba isebenzele ehhovisi, ingasebenz­ela noma ikuphi. Kwazise, nokuthuthu­ka kwezobuchw­epheshe sekwenze kwalula ukuthi abantu basebenze ngokuzimel­a.
Laba abasebenza ngokuzimel­a baye bakhokhelw­e inani lokuhlola lekhasi ngalinye. Futhi bangaseben­za ezikhungwe­ni ezahlukahl­ukene ezizikhiqi­zela zona ezikubhali­le, okubalwa izikhangis­i, okubhalelw­e izisebenzi kuphela, iminyango eyahlukahl­ukene esabalalis­a imibhalo njalonjalo.
Amanye amaproofre­ader aqashwa yizinkampa­ni zakho ukuhlola uhlelo lokubhalwa kolimi, phecelezi amaproofre­ading
firms. Lapha iproofread­er ibekelwa inani lomsebenzi okumele ibe iwuqedile ngesikhath­i esibekiwe.
Sesiphetha nje, lo msebenzi wokucwanin­ga uhlelo lokubhalwa kolimi udinga isineke, isineke sokungakha­thali ukuphindap­hinda into eyodwa. Yingakho kubaluleki­le ukubuye uthathe ikhefu ukuze umsebenzi uwubheke ngamehlo kanye nomqondo ophapheme.
Uzokwazi ukubona amaphutha eqekile ngaphambil­ini. Ake sithi khumu lapha, kwazise siyikha ngomcengez­i, phela igula lendlebe kaligcwali.
USphindile Mthethwa, uyingxenye yethimba lakwaShute­r & Shooter Publishers